Nbanye aha onye na-agafe ụkwụ na-agafe n'ahịa n'ogbe onye nrụpụta na onye na-eweta ịnya ụgbọ ala |Qixiang
Ndebanye aha n'ịgbafe ndị ji ụkwụ aga na ịnya ụgbọ ala
Ihe nrịbama nke ndị na-agafe agafe mere na China, nke ndị ọkachamara na-emepụta ihe na-emepụta, nhazi, àgwà dị mma na ọnụ ala dị ala, nabata ịkpọtụrụ!
Nha mgbe niile Hazie
Ihe onwunwe Ihe nkiri na-atụgharị uche+Aluminom
Ọkpụrụkpụ nke aluminom 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm ma ọ bụ hazie
Ọrụ nke ndụ 5-7 afọ
Ụdị Vetikal, square, kehoraizin, diamond, Gburugburu ma ọ bụ hazie ya
Ikike ụlọ ọrụ
Safeguider bụ otu n'ime ụlọ ọrụ mbụ dị na Eastern China lekwasịrị anya na akụrụngwa okporo ụzọ, nwere ahụmịhe afọ 12, na-ekpuchi ahịa ụlọ 1/6 China.
Ogbako osisi bụ otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke nwere ezigbo mmepụta akụrụngwa na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, iji hụ na ngwaahịa dị mma.
Q1: Gịnị bụ akwụkwọ ikike gị amụma?
Akwụkwọ ikike ọkụ okporo ụzọ anyị niile bụ afọ 2. Usoro ikike njikwa bụ afọ 5.
Q2: Enwere m ike ibipụta akara ngosi nke m na ngwaahịa gị?
OEM orders are highly welcome.Biko zitere anyị nkọwa nke gị logo agba, logo ọnọdụ, onye ọrụ ntuziaka na igbe imewe (ma ọ bụrụ na ị nwere) tupu izipu anyị inquiry.N'ụzọ dị otú a anyị nwere ike na-enye gị kasị ezi azịza na mbụ.
Q3: A kwadoro ngwaahịa gị?
CE, RoHS, ISO9001: 2008 na ụkpụrụ EN 12368.
Q4: Gịnị bụ Ingress Protection ọkwa nke gị mgbaàmà?
All okporo ụzọ ọkụ set IP54 na ikanam modul bụ IP65. Okporo ụzọ agụ akara n'ime oyi-akpọrepu ígwè bụ IP54.
Ọrụ nhazi ngwaahịa
Monocrystalline silicon solar panels (SHARP, SUNTECH, teknụzụ CEEG) nwere nrụpụta fotoelectricconversion nke karịrị 15% na ndụ ọrụ ruo afọ 15;
Enwere ike ịwepụ batrị colloidal (nkwụsị ụgwọ na oke nnyefe, enweghị nrụzi n'ime afọ 2) nwere ike ịwepụ ya n'ihu maka ihe karịrị awa 168, ọ nwere ike ịrụ ọrụ karịa ụbọchị 7 na abalị n'okpuru ọnọdụ ihu igwe siri ike dị ka mmiri ozuzo na-aga n'ihu na mmiri ozuzo.Ndụ ọrụ a haziri bụ ruo afọ 2;
The ultra-high brightness LED light-emitting diode bụ encapsulated na anya convex oghere, ìhè bụ edo, na anya anya anya doro anya site na 1000 mita, na ọrụ ndụ dị ka ogologo 100,000 awa ma ọ bụ 12 afọ;
The akara nchebe ọkwa bụ IP53, ugboro nke 10HZ ka 35HZ bụ elu na vibration-eguzogide dị elu, na ọ nwere ike na-arụ ọrụ na-adịkarị n'okpuru ọnọdụ nke elu na ala okpomọkụ na 93% iru mmiri na 60 ℃ ka -20 ℃;
Oge na-egbuke egbuke dị n'ime oke nke 48 ± 5 ugboro / min, na njikwa ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-akpaghị aka na gburugburu ọchịchịrị ma ọ bụ n'abalị;
Enwere ike ịmekọrịta ihe ndị ọzọ achọrọ dịka ebe eji eme ihe na ọnọdụ.A na-edobe akara ngosi ọkụ niile nke anwụ n'efu n'oge akwụkwọ ikike afọ 1 yana mmezi ogologo ndụ niile.
Nke gara aga: Njikwa nrịbama okporo ụzọ nwere ọgụgụ isi netwọk
Osote: Akara ngosi ihe owuwu okporo ụzọ okporo ụzọ
Ìhè okporo ụzọ ochie
Ìhè nrịbama okporo ụzọ akụ 400mm
Okporo ụzọ Cones na gbọmgbọm
400mm Red Cross na Green Arrow
Akara igwe ọkụ ọkụ nke anyanwụ na-arụ ọrụ
Ìhè okporo ụzọ anyanwụ, Ìhè mgbaàmà okporo ụzọ, Ìhè mgbaàmà anyanwụ, Akara ọkụ okporo ụzọ, Agba mgbama okporo ụzọ, Ọkụ okporo ụzọ na-akwado anyanwụ,